Ilay Fivoriambe Nataon’ny Vavolombelon’i Jehovah “Maneran-tany”
Vavolombelon’i Jehovah 583 no nandeha nitety an’izao tontolo izao nandritra ny roa volana sy tapany, 50 taona lasa izay. Tsy hoe handeha hizaha tany anefa izy ireo. Nitety tany izy ireo mba hanao an’ilay fivoriambe tamin’ny 1963 hoe “Vaovao Tsara Mandrakizay”, sy hifampahery amin’ny Kristianina namany. Nantsoina hoe Fivoriambe “Maneran-tany” izy io, satria nitety tany 20 mahery ireo Vavolombelona ireo mba hihaona tamin’ny mpiara-mivavaka aminy.
Nisongadina isaky ny fivoriambe ilay lahateny hoe “Rehefa Andriamanitra no Mpanjakan’ny Tany Manontolo.” I Nathan Knorr avy any amin’ny foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah no nanao an’io lahateny io, tamin’ny ankamaroan’ireo fivoriambe. Nohazavainy hoe miharatsy ny fiainana eo amin’izao tontolo izao. Noresahiny koa ilay fampanantenana avy ao amin’ny Baiboly hoe hovana ho paradisa ny tany. Nahatratra 580 509 ny mpanatrika an’io lahateny io maneran-tany rehefa natambatra.
Nitety an’izao tontolo izao roa volana sy tapany
Natomboka tany Milwaukee, any Etazonia, ireo fivoriambe. Niantsinanana ireo Vavolombelona avy eo ka nankany New York. Nandeha tany Angletera, Soeda, Alemaina, ary Italia indray izy ireo, taorian’izay. Nanararaotra nitory ny vaovao tsara avy ao amin’ny Baiboly izy ireo, tany amin’ny toerana rehetra nandalovany.
Maro ny olona nankasitraka ny Vavolombelona satria nahafoy fotoana nandehanana tany aminy izy ireo. Nilaza ny tovovavy iray tany Stockholm, any Soeda, fa tsy hadinony mihitsy ny nitsidihan’ireo Vavolombelona azy. Hoy izy: “Hiresaka momba ny finoanareo an’Andriamanitra fotsiny ve no nahatongavanareo atỳ? Tena mendri-piderana ianareo!”
Diso fanantenana anefa ireo Vavolombelona rehefa tonga tao Atena, any Gresy. Nofoanan’ny fanjakana mantsy ny fahazoan-dalana saika hanaovana fivoriambe tao amin’ny Kianja Panathinaikos, noho ny faneren’ny mpitondra fivavahana teo an-toerana. Tsy kivy anefa ireo Vavolombelona be zotom-po. Natao tany an-tranon’olona sy tany amin’ny efitrano fivoriana teo an-toerana ihany ilay fandaharana. Rehefa natambatra àry ny isan’ny mpanatrika tamin’ny faramparan’ny volana Aogositra, dia efa ho 10 000.
Nandeha tany Liban, Jordania, Israely, ary Chypre ireo Vavolombelona rehefa niala tany Atena. Nokarakarain’ny mpiara-mivavaka aminy tsara izy ireo, ary nisy zavatra nampihomehy aza indraindray. Nitantara an’izay nitranga tany Nicosie, any Chypre, ohatra, ny iray tamin’izy ireo. Hoy izy: ‘Isaky ny nody tao amin’ilay trano nivantanako aho ka nanala kiraro, dia nanjavona foana ny kiraroko. Nipoitra ho azy indray ilay izy afaka dimy minitra, sady efa voadio sy nangirana be.’
Kely sisa dia hifarana ny dian’izy ireo. Namakivaky an’i Azia sy Pasifika izy ireo, ka nankany Inde, Birmania (Myanmar ankehitriny), Tailandy, Hong-Kong, Singapour, Philippines, Indonezia, Aostralia, Taïwan, Japon, Nouvelle-Zélande, Fidji, ary Korea. An’arivony ny Vavolombelona nanatrika fivoriambe tany amin’ireny toerana ireny. Maro no nanova ny fandaharam-potoanany mba hahafahana hamonjy fivoriambe, fa ny an’ireto mpifamofo tany Yokosuka, any Japon, ireto no tena niavaka. Nangataka andro tsy iasana tamin’ny mpampiasa azy ilay lehilahy mba hamonjena fivoriambe tany Kyoto. Nilaza anefa ilay mpampiasa fa ny olona handevina sy hatao mariazy ihany no mahazo andro tsy iasana. Naroson’izy ireo aloha kokoa àry ny mariaziny, satria efa nieritreritra ny hivady ihany izy ireo. Tany amin’ny fivoriambe izy ireo no nanao volan-tantely!
Ny fivoriambe natao tany Hawaii sy tany Kalifornia, any Etazonia, no namarana an’ilay dia tamin’ny voalohandohan’ny Septambra. Tao Pasadena, any Kalifornia, no namaranana tanteraka azy io, ary be dia be mihoatra noho ny noeritreretina ny mpanatrika. Nitohana be àry ny fifamoivoizana taorian’ilay fivoriambe. Na izany aza dia niaiky ny sefon’ny polisy hoe iny no fivoriambe nilamina indrindra hitany hatramin’izay, ary nolazaina tao amin’ny gazety iray teo an-toerana izany.
Nisy vokany hatramin’izao ilay fivoriambe
Mbola misy vokany hatramin’izao iny fivoriambe iny. Nivoaka tamin’iny, ohatra, ilay boky hoe “Ny Soratra Rehetra dia Ara-tsindrimandrin’Andriamanitra Sady Mahasoa.” Mbola ampiasaina any amin’ny fivorian’ny Vavolombelon’i Jehovah io boky io hatramin’izao.
I Harold King, taoriana kelin’ny nanafahana azy avy tany amin’ny fonjan’i Chine
Nisy hira vaovao nosoratan’i Harold King navoaka tamin’ilay fivoriambe tao New York. Vavolombelon’i Jehovah izy ary nafahana avy tany amin’ny fonjan’i Chine, tamin’ny taona 1963. Mitondra ny lohateny hoe “Isan-trano” ilay hira, ary tamin’izy natoka-monina tany am-ponja no nanoratra azy io. Mbola hirain’ny Vavolombelon’i Jehovah hatramin’izao io hira io na dia efa nisy fanovana kely aza.
Hafa mihitsy ny fivoriamben’ny vondrom-paritry ny Vavolombelon’i Jehovah amin’izao. Atao any amin’ny toerana kely kokoa izy ireny ka vitsy kokoa ny mpanatrika. Tsy lany fotoana be ny olona rehefa handeha hamonjy azy ireny, satria betsaka kokoa ny toerana hanaovana azy. Olona maro kokoa àry no afaka mifantoka amin’ny fandaharana noho ireny fanitsiana ireny sy ny zavatra hafa. Vavolombelon’i Jehovah fito tapitrisa mahery miaraka amin’ny olona asainy no manatrika ny fivoriamben’ny vondrom-paritra isan-taona. Te hiaraka hanatrika fivoriambe aminay ve ianao amin’ity taona ity? Mitadiava àry toerana hanaovana fivoriamben’ny vondrom-paritra akaiky anao.
mailto:?body=Ilay Fivoriambe Natao “Maneran-tany”%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D502013259%26wtlocale%3DMG%26srcid=share⊂ject=Ilay Fivoriambe Natao “Maneran-tany”